Eny Ambohibao : atahorana hihotsaka ny arabe amin’ny vahilavan’Imamba | NewsMada
Eny Ambohibao : atahorana hihotsaka ny arabe amin’ny vahilavan’Imamba
Mitovy tantana amin’ny arabe ny rano amin’ny farihin’Imamba amin’izao fotoana izao. Tsy mbola avelan’ny tantsaha vohaina ny vavarano hamindrana ny rano mihoatra. Mampanahy, araka izany, ny mety hihotsahan’ny arabe satria efa mihalo ny sisin-dalana ary mikaoka ny arabe ny rano rehefa hatopatopan’ny rivotra.
Ny alarobia sy alakamisy teo, tapaka tanteraka ny lalana eny amin’ny vahilavan’Imamba iny. Nihotsaka ny lalana nanandrify ny vavarano noho ny ora-nikija nisesy sy ny hamafin’ny tosiky ny rano.
Namboarina vonjimaika izany toerana nihotsaka izany ary efa nosokafana ny lalana nahafahan’ny rehetra nivezivezy. Manahy ny mety hampihotsaka ny arabe anefa ny mpandalo eo amin’io rano io. Misafidy ny mihodidina any Talatamaty miaritra ny fitohanan’ny fiara mihitsy ny sasany hialana amin’ny mety ho fitrangan’ny loza tampoka.
Rehefa misy kamiao vaventy mitondra entana mavesatra no tena atahorana hampihotsaka ny lalana. Efa betsaka ireo tranon’olona “villa” sy trano fandraisam-bahiny manamorona ny rano dibo-drano ka tsy azo onenana mihitsy. Mbola betsaka koa ny varin’olona eny an-tanimbary ka antony tsy amohana ny rano izany.